मेवाका कति धेरै गुण ? मान्छेहरु त्यहि पनि कम खान्छन्, - यादका टुक्रा
मेवाका कति धेरै गुण ? मान्छेहरु त्यहि पनि कम खान्छन्,
मेवा तराई र भित्री मधेसमा सजिलै उपलब्ध हुने फल हो। यो फल औषधिय गुणले भरिपूर्ण हुन्छ। त्यसो त, मेवाका रुखको प्रत्येक भागमा कुनै न कुनै औषधिय गुण पाईन्छ। प्राचिनकालदेखि नै मेवाको पातहरू घाउ सफा गर्न, दाद र दुखाई निको पार्न प्रयोग गरिँदै आएको पाईन्छ। यसको जरामा पिसाब लगाउने शक्ति हुन्छ। मेवामा पर्याप्त मात्रामा क्यारोटेन नामको तत्व हुन्छ, जसले शरीरमा भिटामिन ए बनाँउछ।
यसमा पोटासियम पनि पर्याप्त मात्रामा हुन्छ। साथै भोजन पचाउन चाहिने विभिन्न तत्व हुन्छन्। काँचो मेवा खानाले कब्जियतबाट छुट्कारा दिलाउँछ। पाकेको मेवा कलेजोको विभिन्न समस्या समाधानका लागि लाभदायक हुन्छ। झाडापाखाला लागेमा बेलामा पाकेको मेवाको सेवनले पाखाला बिस्तारै कम हुन्छ। कब्जियतमा पाकेको मेवाको २० देखि २५ वटा बीउ १० देखि १५ दिनसम्म दिनको २ पटक खाँदा कब्जियत हट्छ। मेवाको पातलाई आगोमा तताएर दुखेको ठाँउमा राख्दा दुखाई कम हुन्छ।
मेवामा पाईने विशेष तत्वले घाउमा भएका मृत कोषिकाहरूलाई हटाउँछ र घाउलाई निको पार्छ। यसका लागि केही दिनको समय भने लाग्छ। घाउलाई पहिले सफा गरेर मृत कोषहरू हटाउनुपर्छ। घाउमा पीप छ भने बिरामीलाई दिनको २÷३ घण्टामा दाँया बाँया कोल्टो पारेर सुताउनुपर्छ। त्यसपछि कीटाणुरहित सफा पातलो कपडाई काँचो मेवाबाट निस्कने सेतो दुधजस्तो पदार्थमा भिजाएर घाउमा राख्नुपर्छ। यो क्रिया दिनदिनै गर्नुपर्छ। घाउ गहिरो छ भने दिनको १ ÷२ चोटी दोहोर्‍याउनुपर्छ। साथै बिरामीलाई कोल्टे फर्काउनुपर्छ। पाकेको मेवाको गुदीलाई मिचेर अनुहारमा केहीबेर दल्ने र एक छिन राखेर धुने गरेमा अनुहारमा चमक ल्याउछ।
Don't Miss it यी ५ घरेलु उपायहरुले टाउको दुखेको मिलिक्कै ठिक पार्न सक्छन्,
Up Next कस्तो बेलामा मेवा मुखमा पनि हाल्नु हुदैन,
श्रीमान हो, हिटलर होइन, यति कुरा गरे कुनै पनि श्रीमान तानाशाही होइदैन
प्रतिमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेकी छिन् । उनको व्यवहार कुशल पनि छ । उनी आफन्त, छिमेकी तथा साथी-भाइबीचमा लोकप्रिय छिन् ।…
घर बनाउन सुरु गर्नु हुदैछ भने पहिले यति कुरा चै थाहा पाइराख्नै पर्छ
घर निर्माण गर्दै हुनुन्छ ? सबै नापनक्सा तयार छ । जग्गा तयार छ । सिमेन्ट, बालुवा, रोडा, ईटा, रड, काठ…
11 months ago 1466 Views